News - Dhalista Rullaluistemadka
Sidoo kale waxaa loo dhisay sidii kubbado saa'id ah, gawaarida gawaarida waxay leeyihiin xiriir qadka halkii ay ka xiriiri lahaayeen barta dhibcaha, iyaga oo awood u siinaya awood weyn iyo iska caabin naxdin leh. Rollers qudhoodu waxay ku yimaadaan dhowr qaabab, kuwaas oo, cylindrical, spherical, tapered, iyo irbad. Wareegyada meertada ah ee meertada ahi waxay maareeyaan oo keliya culeyska xaddidan ee xaddidan. Wareegyada duudduuban ee goobeedku waxay qaadi karaan jahawareer iyo riixitaan dheeri ah, iyo, markii la labalaabo, dhinac kasta u jeedi. Wareegyada duuban ee duuban ayaa maareyn kara culeysyo culus oo xoog leh. Cirbadaha cirbadaha, noocyo kala duwan oo silsilado goos goos ah, ayaa xamili kara culeysyo badan oo shucaac ah oo ku saabsan cabirkooda, waxaana loo samayn karaa sida cirbadaha lagu riixo rullaluistemadka.
Qalabka wax lagu duubo ayaa la heli karaa iyada oo naqshadaha buuxa ee buuxa iyo cirbadaha cirbadaha ay ku dhowaad aan beddelmi doonin ay noqon doonaan qaabkan. Cirbadaha cirbadaha ayaa si gaar ah waxtar ugu leh dhaqdhaqaaqyada isweydaarsiga, laakiin khilaafku wuu ka sarreyn doonaa sababtoo ah xoqidda-ka-horjeedka-duubista.
Markaad isticmaaleysid silsiladaha isdabajooga ah ee silsiladaha leh ee kuyaala fallaadhaha oo leh qallooca qalloocan, waxaa lagaa door bidaa inaad isticmaasho laba saaro oo gaaban oo gadaal-gadaal ah halkii aad kaheli laheyd hal duub oo dhaadheer
Doorashada Kubbadda ama Dhaldhalaalka
Sida caadiga ah, xargaha kubbadaha waxaa loo isticmaalaa xawaare sare iyo culeys ka fudud kan saa'idka ah. Wareegyada duubku waxay sifiican uga shaqeeyaan hoos u dhaca shoogga iyo raadka raadka.
Wareegyada kubbadda waxaa badanaa loo iibiyaa sida kiniisadaha oo si fudud ayaa loogu beddelaa cutubyo. Dhajiyeyaasha duubku badanaa waa la kala qaybin karaa oo sidee rullaluistemadka iyo rollers, ama tartanka dibadda ama gudaha, shaqsi ahaan ayaa loo beddelay. Gawaarida gadaal-gawaarida waxay u adeegsadaan qaababka noocaas ah gawaarida hore. Faa'iidada naqshaddan ayaa ah in jinsiyadaha loo jajabin karo fallaadho iyo guryo si loo abuuro shirar joogto ah iyada oo aan khatar loo gaysan roogayaasha laftooda.
Wareegyada kubbadda hal-safka ah waa la jaangooyay waxaana loo isticmaali karaa si isweydaarsi ah soo saarayaasha. Wareegyada duudduuban ayaa si aan rasmi ahayn loo jaangooyay sidaa darteed tilmaamuhu wuxuu u baahan yahay inuu la tashado buugga soo saaraha si uu u xusho midka ku habboon dalabka.
Wareegyada isdabajooga ayaa lagu soo saaray qadar cayiman oo gudaha ah. Qalab kasta oo khaldan oo kaliya kubbada ka weeciya booska kana saaraya nadiifinta gudaha waa inaysan saameyn badan ku yeelan nolosha culeyska. Wareegyada duubku waxay aad ugu nugul yahiin isku dheelitir la'aanta xagal. Tusaale ahaan, kubbadda oo ku socota xawaare dhexdhexaad ah oo qallafsan oo dabacsan ayaa laga yaabaa inay si guul leh ugu shaqeyso qaladka xagasha sida ugu sareysa 0.002 illaa 0.004 gudaha. inta udhaxeysa boorsada iyo usheeda dhexe. Mashiinka wax lagu duubo ee silsiladda ah, marka la barbardhigo, waxaa laga yaabaa inuu dhibaato ku jiro haddii jaangooynku ka bato 0.001 gudaha ./in. Soo-saareyaasha ayaa guud ahaan bixin doona kala-duwanaansho la aqbali karo oo isku-dheelitirnaan qallooc ah oo loogu talagalay mas'uuliyaddooda shaqsiyeed